संघीय राजधानी सबैभन्दा जोखिमपूर्ण:: Naya Nepal
काठमाडौं : नेपालमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार ५२ जिल्ला ‘रेड जोन’मा छन्। काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी संक्रमित छन्।
दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लालाई रेड जोनमा राखिएको छ। महाशाखा प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाइएको छ। ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले योजना बनाएको छ’, डा. पाण्डे भन्छन्, ‘विस्तृत जानकारी मन्त्रालयसँगै छ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि सम्पर्क हुन सकेन।
देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या नै ३१ हजार ३ सय १५ पुगेको छ। आइतबार मात्र २ हजार ७१ जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्ममा जम्मा संक्रमितको संख्या १ लाख ७ हजार ७ सय ५५ पुगेको छ।
संक्रमण भयावह स्थितिमा जाँदै गर्दा अस्पतालहरूमा शय्या अभाव हुन थालेको छ। भेन्टिलेटर, आईसीयू अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। हालसम्म जम्मा ६ सय ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आइतबार एकै दिन २२ जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।
संक्रमण दु्रत गतिमा फैलिए पनि मानिसको चहलपहल उत्तिकै देखिएको छ। नजिकिँदो चाडपर्वका लागि किनमेल गर्नेका कारण सहरबजारमा भीडभाड छ। सवारीसाधन खुलेसँगै सहरबाट गाउँ र गाउँबाट सहर जाने आउने क्रम चलिरहेको छ। यस्ता गतिविधिले अझै खतराको स्थितितिर लैजाने सम्भावना भएको विज्ञको भनाइ छ।
‘कोरोना संक्रमणको यो अवस्था आउँछ भन्ने पूर्वानुमानित थियो’, आईओएमका पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल भन्छन्, ‘अहिले सरकार र जना दुवैले हात उठाएको अवस्था छ। गम्भीरता कसैसँग पनि छैन।’ यो अवस्था अझै विकराल बन्न सक्ने उनको अनुमान छ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. अनुप बाँस्तोला संघीय राजधानीको हकमा अहिलेकै अवस्था एकदमै जटिल भएको बताउँछन्। ‘संक्रमणको स्थिति हेर्दा अहिले अन्य जिल्लाभन्दा राजधानीको अवस्था विषम छ’, डा बाँस्तोला भन्छन्, ‘अस्पतालका शय्याहरू भरिएका छन्। सिकिस्त बिरामीलाई शय्या पाउने अवस्था छैन।’ तर, राजधानीमा अझै विकराल स्थिति आउन सक्ने उनको ठम्याइ छ।
अन्य जिल्लाको हकमा पनि दिनदिनै अवस्था गम्भीर बन्दै जाने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ। ‘राजधानीबाहेकका जिल्लामा पनि अहिलेभन्दा गम्भीर अवस्था आउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, यो सबै कुरा मानिसको व्यवहारमा भर भर्ने कुरा हुन्।’
सरकारले चाडपर्व जहाँ छौं त्यहीं बसेर मनाउन अनुरोध गरेको छ। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्रै हिँडडुल गर्न सरकारले भनेको छ। तर, जनता चाडबाड मनाउन राजधानीबाट गाउँतिर फर्किने धेरै सम्भावना रहेको डा. बाँस्तोलाको अनुमान छ। चाडपर्वमा धेरै मानिस राजधानीबाहिर गए यहाँ प्रकोप कम हुने उनी बताउँछन्।
‘चाडपर्वले राजधानीबाट मानिस बाहिरिने सम्भावना धेरै छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो भएमा यहाँ संक्रमणको दर घट्छ। यहाँबाट गएका मानिस जुन–जुन ठाउँमा जान्छन् ती ठाउँमा दुई–चार हप्तादेखि संक्रमण बढ्छ।’
यो अवस्थामा संक्रमण रोक्न नसकिने उनी बताउँछन्। ‘सरकारले आवतजावत रोक्न सुरुमा लकडाउन गर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो ठीक थियो। नत्र अहिलेको अवस्थामा हामी दुई महिनाअघि नै पुग्ने थियौं। तर लकडाउन गरेर पनि सीमा नाकाहरूमा आवतजावत पूर्णरूपले रोक्न सकिएन। अहिले त झनै सम्भव छैन।’ सुरुमै भारतबाट तराईका जिल्लामा छिरेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसकिएकाले संक्रमण फैलिएको उनको भनाई छ।
आवतजावत रोक्न लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प नरहेको डा. अग्रवाल बताउँछन्। ‘मानिसको आवतजावत रोक्न त निषेधाज्ञा र लकडाउन नै हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छैन। कसैले पनि मान्दैनन्।’ यस्तो अवस्थामा सबैले गम्भीर भएर सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मानिसको चहलपहल नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने डा. बाँस्तोलाको भनाइ छ। ‘अहिले रोगभन्दा भोकले मर्ने डर छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले संक्रमण रोक्न धेरै चुनौती छन्। अहिले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले लकडाउन निषेधाज्ञा सम्भव छैन।’
२६ असोज, काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथले दसैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजना ल्याएको छ ।
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी परिचालन, दुरुस्त कारबाही, शीघ्र र सहज सेवा पहुँचको व्यवस्था मिलाएर चाडपर्वलाई सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यका सुरक्षा योजना लागू गरिएको महाशाखाका एसएसपी भिमप्रसाद ढकालले बताए ।
उनका अनुसार उपत्यकाको सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन, सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न र चाडपर्वमा हुनसक्ने ठगी नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाइएको छ ।
यात्राको क्रममा कसैलाई केही समस्या भए १०३ मा फोन गर्न समेत उनले सबैमा आग्रह गरेका छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र होइन, चाडपर्वको समयमा यात्रुसँग बढी भाडा लिने, बाटोमै यात्रुलाई ओराल्दिने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन आफूहरु चनाखो बनेको ढकालले बताए ।
सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन
भीडभाड हुने स्थल र टिकट काउन्टरहरुमा हुन सक्ने ठगी तथा अपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न महाशाखामा रहेको पीडित सहायता ईकाईबाट सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी निगरानी थालिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी रामेश्वर यादवले बताए ।
उनका अनुसार मुख्यतः बसपार्क क्षेत्र, कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, पुरानो बसपार्क, गौशाला लगायत टिकट काउन्टर भएका स्थानमा सादा पोसाकमै प्रहरी परिचालन गरि टिकट काउन्टरमा विशेष निगरानी गरिएको छ । सादा पोसाकका ट्राफिक प्रहरीले बढी भाडा लिइ टिकट काट्ने, फर्जी टिकट तथा डबल टिकट काट्ने व्यक्तिमाथि निगरानी राख्ने उनले जनाए ।
लामो दुरीका भाडाका सवारीसाधनमा २ जना चालक अनिवार्य रुपमा भए/नभएको प्रविधिबाट निगरानी गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यसका लागि ट्राफिक कम्युनिकेशन एपलाई प्रयोगमा ल्याइने ढकालले बताए ।
उनका अनुसार टिकट काउन्टर तथा सवारी साधनभित्र यात्रुले देखिने गरी भाडा दररेट टाँस गर्ने काम अनिवार्य गराइनेछ । मोटरसाइकल चालकले हेल्मेट प्रयोग नगर्ने, तीब्र गतीमा सवारी चलाउने, ओभरलोड, सवारी अन्य भाग तथा छतमा यात्रु मालसामान राख्न, जिकज्याक सवारी चलाउने जस्ता ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने उपर सीसी टिभीमार्फत निगरानी गरिने उनले जनाए ।
बसपार्कबाट बाहिरिने गाडीहरुलाई अनिवार्य रुपमा यान्त्रिक परीक्षण गर्न समन्वय गरिने महाशाखाले जनाएको छ ।
दैनिक आकस्मिक चेकिङ
महाशाखाले चाडपर्वका बेला निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा घट्न सक्ने सम्भावित घटनालाई लक्षित गरेर बिहान, दिउँसो, साँझ र राति चार पटकसम्म विशेष चेकजाँचको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
उपत्यकाबाट बाहिरिने नाका तथा अन्य स्थानहरुमा सवारी साधनहरुको मापसेसहितको सम्पूर्ण चेकजाँच हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वका समयमा नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भु, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चावहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाती, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा, पुरानो बसपार्कलगायतका ठाउँमा लामा दुरीका सवारी साधनलाई लक्षित गरेर विशेष जाँचको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
भीडभाड क्षेत्रमा थप प्रहरी परिचालन
महाशाखाले उपत्यका भित्रिने नाका, व्यापारीक क्षेत्रहरु तथा बसपार्क एरियामा आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन गरिने जनाएको छ ।
एसएसपी ढकालका अनुसार १७२ स्थानहरुमा दैनिक नियमित ड्युटीका लागि ९०० जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ । चाडपर्वको समयमा अतिरिक्त थप १५० ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिने प्रवक्ता यादवले बताए ।
काठमाडौं उपत्यका भित्रको सुरक्षा संयन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै १४ वटा नागरिक तथा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालमा ल्याइने महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर प्रसाद यादवले जनाए । यात्रुहरुको गुनासो सुक्ष्म रुपमा मनन् गरी तत्काल सम्बोधन गर्न नागरिक कक्ष राखिने उनले बताए ।
उपत्यकाको नागढुङ्गा, कलंकी, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँबसपार्क, चावहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जागती, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा सहायता कक्ष रहनेछन् ।